Ugu yaraan 27 qof oo ku dhimatay qarax isbiimayn ah oo ka dhacay masjid shiicada leeyihiin oo kuyaala magaalada Kabul ee Afkaanistaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 27 qof oo ku dhimatay qarax isbiimayn ah oo ka dhacay masjid shiicada leeyihiin oo kuyaala magaalada Kabul ee Afkaanistaan
November 21, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Masaajidka Baqer-ul-uloom ee gudaha magaalada Kabul. [Sawirka: Reuters]
Kabul-(Puntland Mirror) Qof miino isku soo xiray ayaa isku qarxiyay gudaha masaajid ay Shiicada leeyihiin oo kuyaala caasimada dalka Afkaanistaan ee Kabul, waxaana qaraxaas ku naf waayay ugu yaraan 27 qof, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha.
Qaraxa isbiimaynta ah ayaa ka dhacay masaajidka la dhaho Baqer-ul-uloom oo kuyaala deegaanka Baqer-ul-uloom.
Taliyaha ciidamada booliiska Kabul, Abdul Rahman Rahimi ayaa warbaahinta u sheegay in dad badan oo kale ay ku dhawacmeen qaraxa, lagana baqayo in tirada dhimashada ay kororto.
Ma jirto koox si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada weerarkaas.
February 27, 2017 Hoggaamiye sare oo katirsanaa Talibaan oo lagu dilay duqayn hawada ah oo ka dhacday gobolka Kunduz
Garowe-(Puntland Mirror) Mutinous Puntland forces have seized southern checkpoint of Garowe, where the Ministry of Finance’s office of the tax collector is located, sources confirmed to Puntland Mirror. The forces were frustrated after the government failed to [...]